ကြီးဒေါ်နှင့် offline | Layma's World
Posted on May 20, 2008 by layma
နာဂစ်က … မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ… ဟိုဂျာနယ်မှာရေးထားတာတော့ နာဂစ်ဆိုတာ ပန်းပွင့် လို့အဓိပ္ပါယ်ရသတဲ့ …။ ပန်းပွင့်မို့ သာ တော်တော့တယ် … ဆင်ရိုင်းသာဆိုရင် မြန်မာပြည် တက်တက်ပြောင်မယ်… ။
ညည်းတို့ က သတင်းစာမှ မဖတ်ဘဲ … သတင်းစာထဲ မုန်တိုင်းတိုက်နေတာ ဧပြီလကတည်းကဆိုပဲ အေ့ …။ ညည်းတို့ က သတင်းစာဆို နာရေးလောက်ပဲ ကြည့်တာကိုး … ။ မိုးလေ၀သ သတင်းမဖတ်တော့ မသိဘူးပေါ့…။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မလုပ်နိုင်တာ… ။
ကြိုသိတဲ့သူတွေလည်း ဘာမှပြင်ဆင်မထားပါဘူး… ကြီးဒေါ်ရာ…။ ဘာတွေ ဘယ်လို ပြင်… ဘယ်လိုနေ …ရမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူသိသလဲ…ပြော… ။ မုန်တိုင်းမှ မကြုံဘူးတာပဲ..ဟာပဲ..ဟာကို…။
အဲဒီညက မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာ မိုးလေ၀သ သတင်းသေချာ နားထောင်ပါ လို့ .. ငါမပြောဘူးလား…။ ညည်းတို့က အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းတဲ့ဟာတွေ … ။ ကုလားကားတွေ…တရုတ်ကားတွေ … ဘိုကားတွေ ပြတဲ့5Movie ပဲ ကြည့်နေတာကိုး…။
MRTV ကြည့်ပါတယ်..ကြီးဒေါ်ကလဲ …။ “ နင်…၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီလား…” ဆိုတဲ့ဟာ လာလို့တောင် အဖွားက “ငါဆို ၁၈ နှစ်ပြည့်ခဲ့တာ ၄ ကျော့တောင်ကျော်ပြီဆိုတော့ ၄ မဲ ပေးရမှာလား…”လို့ မေးလို့တောင် ရယ်ကြရသေးတယ်လေ…။
အေးလေ… ညည်းတို့ကြည့်တယ်ဆိုတာ … ခဏလေ…။ ခဏကြည့်ပြီး… ပြန်ပြောင်းကြည့်တာ …။ ခုတော့ … ငါသတင်းကြည့်ချင်တယ်နော် … ။ ဟိုပြောင်း ဒီပြောင်းလုပ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ …။ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ… နေရာချထားတာတွေ အလှူပစ္စည်းပေးတာတွေ … ငါကြည့်ဦးမယ်…။
ကြီးဒေါ်နော် … သူများလှူတာတွေ သွားရေကျမနေနဲ့ …။
တယ်… ညည်းစကားက ဘာတုန်း … အနှောင့်မလွတ်…အသွားမလွတ်နဲ့ …။ ကြည့်စမ်း…….သစ်ပင်တွေဆိုတာ ကုန်ပါရောလား… နောက်နှစ်နွေဆို အတော်ပူတော့မှာ …။ အပူကြောင့် လူတွေသေကြဦးမယ်…။
လူတွေလိုမျိုးသာ သစ်တစ်ပင်ခုတ်ရင်… ထောင်ဒဏ် ဘယ်နှစ်လ… ဒဏ်ငွေ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး နာဂစ်ကို ဒဏ်တပ်လို့ရရင် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရမှာနော်…။
နာဂစ်ကို ဒဏ်တပ်ဖို့စဉ်းစားနေသေးတယ်… နာဂစ်က ဒဏ်ခတ်သွားတာ မတွေ့ဘူးလား…။
အမယ် … ဘာလို့ နာဂစ်က ဒဏ်ခတ်ရတာတုန်း …။
ညည်းတို့ အင်မတန် ခေါင်းမာတဲ့ဟာတွေမို့လို့ ဒဏ်ခတ်သွားတာလေ…။ ဓါတ်ကြိုးနဲ့မလွတ်တဲ့ သစ်ကိုင်းတွေ ခုတ်ဆိုတာ မခုတ်လို့ သူဝင်ရှင်းသွားတာလေ….။
စလောင်းတွေ ဖြုတ်ဆို …မဖြုတ်လို့ သူဝင်ဖြုတ်ပေးသွားတာလေ ….။
ဒါကတော့ … ကြီးဒေါ်ရယ်… အခွန်ဆောင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုလို့ မဖြုတ်တော့တာလေ…။
နောက်ပြီး… ရှိသေးတယ်… စကားတွေကို … ပြောကောင်းမှန်းမသိ…မပြောကောင်းမှန်းမသိ … ဘန်းစကားဆိုပြီး… လျှောက်လျှောက်ပြောကြတာ … ညည်းတို့ပြောပြောနေတာလေ … “ ဒီဇိုင်းးက လန်တယ်ကွာ .. လန်ထွက်နေတာပဲ..” ဆိုတာလေ…။ ခုတော့ လန်ထွက်ကုန်ပြီမို့လား … အမိုးတွေ ..။
အရင်တစ်ခါ “ သေပြီဆရာ..” ခေတ်စားတုန်းကလည်း ဗုန်းကွဲတယ်လေ …။
ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီးတွေက ပြောတာ …“ စကားနောက် တရားပါ ” တဲ့ …။ စကားဆိုတာ ခေတ်စားတိုင်း သုံးလို့ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး…။
ခုခေတ်စားနေတဲ့ စကားက “ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ..” တဲ့ ..။ ပြီးတော့ နာဂစ် ပြီးရင် ရာဂျစ်တဲ့ …။ ဆိုင်ကလုန်းပြီးတော့ တိုင်ဖုန်း တဲ့ ..။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ပြောနေကြပြန်ပြီ …။
အဲဒါခက်တာပေါ့ … မဟုတ်ကဟုတ်က ဆို အလွန် ပြောချင်ကြတယ် …။ ဟိုနေ့ ကလည်း ငလျင်လှုပ်တော့မယ် ဆိုလို့ ငါ့မှာ အိမ်ပြန်ပြေးရတာ အမောတကောပဲ …။
ကောလဟာလ … အင်မတန် ဖြန့် ချင်တဲ့ဟာတွေမို့လို့ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အားလုံး ပြတ်တောက်သွားရင် ဘယ်လိုနေမလဲ…နေကြည့်ကြစမ်းဟယ်… ဆိုပြီး နာဂစ်က ပညာပေးသွားတာ…။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအားကိုးလွန်းတဲ့ဟာတွေ လျှပ်စစ်မရှိရင် ရေသုံးဖို့တောင် အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ သိအောင်လုပ်သွားတာ …။ မှတ်ကရော…။
ကြီးဒေါ်ကလည်း … အဲလိုမပြောပါနဲ့ ..။ ရွာတွေဆို…သနားစရာ…။ လူတွေ သေကြတာ အများကြီးပဲ …။
ဟုတ်ပါတယ်အေ … ။ ငါကညည်းတို့ကို မြင်ပြင်းကတ်လို့ ပြောနေတာပါ …။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ် … မိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးနဲ့… ခြောက်ခြားစရာကြီးပါအေ … ။
တိုက်အိမ်တွေက အလွန်ဆုံးဖြစ်ရင် အမိုးလန်..ပြတင်းပေါက်ပြုတ် … ဒီလောက်ပဲဖြစ်တာ…။ သဘာဝတရားကြီးကလည်း မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်တယ် နော် …။
ဒါနဲ့ လမ်းထိပ်က သစ်ကိုင်းပုံကြီး မရှိတော့ဘူးနော် ဒေါ်လေး…။
အေးလေ… ရဲဘော်တွေ လာရှင်းသွားကြတာလေ … အရေးဆို သူတို့ပဲ ထွက်ထွက်လာရတာ … ။ တစ်ခါသုံးကျွတ်ကျွတ်အိတ် လက်အိတ်လေး… တစ်ခါသုံးနှာခေါင်းအုပ်ပါးပါးလေးတွေနဲ့ …။ မိုးရွာလာတော့ အခက်အလက်မရှိတော့တဲ့ သစ်ပင်ငုတ်တိုကြီးအောက်မှာ ထိုင်လို့ …။ သနားစရာပါအေ …။
သနားစရာမဟုတ်ပါဘူး ကြီးဒေါ်ရယ်…။ လေးစားစရာပါ … ။ လေးမတို့ အဆင်ပြေအောင် သူတို့က ပင်ပင်ပန်းပန်း ( အမိန့်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ..) လုပ်ပေးနေတာလေ…။
အလိုတော် … ဖြစ်ရပြန်ပြီ … ညည်းပဲ အမျိုးမျိုး …။
အော် … မုန်းစရာလုပ်တဲ့သူကိုမုန်းပြီး လေးစားစရာလုပ်တဲ့လူကို လေးစားတာပေါ့ ကြီးဒေါ်ရဲ့ …။ ဒါမှ လူပီသမှာပေါ့ … ။
အင်း… လူတွေဆိုတော့ လူပီသဖို့ကြိုးစားနေကြရတာပေါ့ ….။ ခုဆို နိုင်ငံတကာက လူပီသစွာ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေ ပေးနေသလို တို့အစိုးရကလည်း လူပီသစွာ အကူအညီတွေလက်ခံရယူ နေပြီဆိုတော့ ၀မ်းသာစရာပဲ …။
ပြည့်အင်အားဟာ ပြည်တွင်းမှာရှိသလို ပြည်ပမှာလည်း ရှိနေတာပဲ နော် … ။
လေးမတို့လည်း လူပီသစွာ လူသားဆန်တဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ရဦးမယ် … ။ ကဲ..ကဲ..မနက်ဖြန် ကွမ်းခြံကုန်းက ရွာတွေကိုဆင်းမယ့်အဖွဲ့ နဲ့ပေးဖို့ အ၀တ်တွေ ဆာလာအိတ်ထဲ ထည့်ကြရအောင် …။ ။
Filed under: Pieces, Seasonal Post |
« ဘလော့ဂ် ရပ်ဝန်းမှာ တစ်နှစ်တာ … မိုးရွာနေသည် ( ၂ ) »
သားကြွက်, on May 20, 2008 at 5:07 pm said:
အောင်မငီးး တီကြွက်ရဲ့ ပြန်တွေ့ ရလို့ဝမ်းသာလိုက်တာ ဟီးး မုန်တိုင်း ၀င်တော့ စိတ်တွေပူးပြီး ညညအိပ်မရ သားကြွက်မှာ မျက်၇ည်နဲ့အရက်ခွက်ဗျ ( အမေက မှာထားတယ် စိတ်ညစ်ရင် အရက်သောက်တဲ့ 😛 ) ပို့ စ်ထဲက အဖွားပြောတဲ့ စကားကို သဘောကျတယ် ၁၈ နှစ်ပြည့်လို ၄ ခါတောင်ဆိူုတာလေ ။ သတင်းတွေကြည့်၇တာ ဟုတ်မှမဟုတ်တာ ဘယ်သူကကြည့်မှာတုန်း မနေ့ ညက လာသွားတဲ့ ဂျူမုံးကားက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသေးတယ်။
တီလေး အမြဲဘေးရန်ကင်းပါစေဗျာ ။
soemoethu, on May 21, 2008 at 8:03 am said:
ွ့ကြီးတော်နဲ့ offline…..offline နဲ့ ကြီးတော်..အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပိုစ့် လေးပါ..သေချာဖတ်သွားတယ်နော်..မမ..အဆင်ပြေပါစေရှင်…
ညိမ်းညို, on May 21, 2008 at 2:47 pm said:
အမကြီးရေ ပြန်လာပီဆိုလို့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ အစစအရာရာ ဘေးရန်ကင်းရှင်းပါစေ။ တတ်စွမ်းသမျှ လုပ်ကိုင်ကူညီပေးကြသူတွေအားလုံးကို တအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ ကြီးတော်က တော်တော်စကားပြောကောင်းတာပဲဗျ 🙂 အမလေးမကို တူလို့လားမသိ 😛
THS, on May 21, 2008 at 5:56 pm said:
ကြှးတော်ကြီးလဲ စကားပြောကောင်းတယ် တူမလေးလဲ စကားပြောကောင်းတယ် ၊ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်နော် အစ်မလေးမ
မျှားပြာ, on May 21, 2008 at 6:23 pm said:
သံယောစဉ် သံယောစဉ် ….
အနော်တော့ ပြတ်သလိုရှိနေပီဗျ …။
အဆင်ပြေပါစေ အစ်မလေးမရေ ..။
သီဟညိမ်း, on May 22, 2008 at 12:28 am said:
လောကဓံကို တည်ငြိမ်သော မနုသကာရီ နှလုံးဖြင့် ရင်ဆိုင်
nhn, on May 22, 2008 at 6:58 am said:
ခုမှပဲ ပြန်တွေ့ ရတော့တယ်ဗျို့ ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။ လေးမဆီဆက်သွယ်ဖို့မေးလ်ရှိလားဗျ…ရှိရင်တဆိတ်လောက်….
tzm, on May 22, 2008 at 10:48 am said:
ကျွန်တော်အိမ်က ဘေးအဖီနဲ့ ခြံပျက်သွားတယ်။ အိမ်မကြီးကတော့ ဘာမှမဖြစ်လို့ တော်သေးတယ်။ ရေတွေတော့ ရွှဲကုန်တာပေါ့။ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရတာပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ မရောက်ဖြစ်ဖူး။
နောက်မှ ထပ်လာခဲ့မယ်.. မမလေးရေ… အားလုံး အဆင်ပြေပါစေနော်..
သက်ဝေ, on May 22, 2008 at 11:15 am said:
အရမ်းကောင်းပြီး ခေတ်မှီတဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ခုပါ။
မတွေ့ တာကြာလို့ စိတ်ပူနေတာ…
မင်းကျန်စစ်, on May 24, 2008 at 12:18 am said:
အမတို့ မိသားစု ဘေးအနရာယ်ကင်းလို့ စာပြန်ရေးတာကို ဝမ်းသာမိတယ်။ စာဖတ်ပီး ကြည်နူးပါတယ် ရီလဲရီမိတယ်။ ဒီလို တွေးပေးတဲ့အတွက် တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်။ အမအရေးအသားတွေက ကောင်းဆဲပဲနော်။ မရေးအားလို့ဗျာ ရေးချင်စိတ် အရမ်းပေါ်လာမိတယ်။ ခုတော့ မျိုသိပ်ထားလိုက်အုံးမယ်။ စာမေးပွဲပိးမှ ဖောက်ချတော့မယ်း)
heartmuseum, on May 24, 2008 at 8:49 am said:
မရေးတာကြာပေမယ့် အရေးအသားကတော့ ပိုကောင်းလာတယ်ဗျို့။ post အသစ်တွေ စောင့်ဖတ်မယ်ဗျာ။ ဒီpost လေး ကောင်းတယ်ဗျာ။
မိ, on May 25, 2008 at 12:59 pm said:
MhawSayar, on May 27, 2008 at 12:42 pm said:
အတွေးကောင်း၊ အရေးကောင်းပဲဗျို့။ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိတယ်ကြားလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ 🙂
Minn, on June 5, 2008 at 2:39 pm said:
MY Cherry dream’ friend
Thanks for your name
lay-ma, on June 19, 2008 at 8:49 pm said:
>သားကြွက် .. မျက်၇ည်နဲ့အရက်ခွက်တဲ့ .. ရိုက်ချင်စရာ ကောင်းလိုက်တာ …။
>စိုးမိုးလေး .. အဆင်ပြေ အောင်နေပါတယ် ညီမရယ်…။
>ညိမ်းညို … ကြီးဒေါ်က လေးမကို အတုခိုးနေတာလေ…။
>တင့်ထူး .. တူအရီး နှစ်ယောက်လုံး စကားပြောကောင်းတယ်လို့ပြောတာလား..။
>မျှားပြာ .. သိပါတယ်.. ပြတ်ပြီ ဆိုတာ …။
>သီဟညိမ်း .. ကရင်လေး ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ..။
>nhn… ကိုညိုထက်ရေ ပြန်မှ တွေ့ ရပါတော့မလားလို့ …။
>ကိုသန့်.. ကိုသန့် ရေ.. ဆိုး၂ရွား၂ မဖြစ်တာ တော်သေးတာပေါ့ …။
>မသက်ဝေ .. စိတ်ပူပေးတာ အရမ်း ၀မ်းသာတယ်…။
>ကျန်စစ် … ဖောက်ချ မှာ အပြေးလာခဲ့တော့မယ်…။
>ကိုအညတရ … ကျေးဇူးပါရှင် …။
>မိ … နင် ရယ်ချင်နေမယ် ဆိုတာ သိနေတယ်လေ …။ ၀မ်းနည်းစာတွေ ကြားထဲ နည်းနည်း ပေါ့၂ ပါးပါး ဖြစ်အောင်လို့ လေ..။
>မှော်ဆရာ … ၀မ်းသာတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာတယ်…။
>မင်း … တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ များ မှားရေးတာလား.. ဟင်…။